Home Wararka Xil. Khadijo Maxay u damisay korontada ciyaartii fiinaalka ee Degmooyinka?
Xil. Khadijo Maxay u damisay korontada ciyaartii fiinaalka ee Degmooyinka?
Waxaa bannaank u soo baxay khilaaf u dhaxeeya maamulka gobalka Banaadir iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya taasoo sabab u aheyd korantadii dantay habeeno ka hor, xili ay billaaban rabtay ciyaarta kama dambeesta ah ee degmooyinka gobalka Banaadir.
Ciyaartaan oo u dhaxeysay degmooyinka Waabari iyo Dharkenlay ayaa inta aysan billaaban ka hor, waxaa baxday korontada waxayna maqneed muddo dhan hal saac ugu yaraan iyadoo markii dambe lagu dhawaaqay in ciyaarta la baajiyay.
Xog aan helnay ayaa sheegaysa in wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye ay amar ku bixisay in la damiyo korontada garoonka, waxayna toos u wacday madaxdii korontada iyo maamulka garoonka Injineer Yariisow Stadium. Garoonka ayaa waxaa gacanta ku haya shaqaale wasaaradda ay mushahar siiso.
Xogta kale ee aan helnay ayaa sheegaysa in garoonka aysan imaanin wasiir Khadiijo iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo labadooda ku marti qaadnaa islamarkaana ay aheyd in ay goob joog ka noqdaan.
Sidoo kale MOL ayaa ogaatay in wasiir Khadiijo ay ra’iisul wasaaraha uga digtay tagitaanka garoonka iyadoo kuwar gelisay in uu ka jiro qal qal amni oo aan la isku haleyn karin.
Markii ay baxday korontadii garoonka ayaa ciidamada amniga si deg deg ah waxay garoonka uga saareen guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish waxaana la geeyay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ka agdhawaa garoonka, muddo kadibna waxaa guddoomiyaha soo wacay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka dalbaday in uu baajiyo ciyaarta.
Khadiija ayaa la sheegay inay ka xun tahay in wasaaradda aan kaalin laga siin qabashada tartankan.
Guddoomiyeyaashii ka horeeyey Filish ayaa wasaaradda kaalin ka siin jiray cayaarahan, hase yeeshee Filish ayaa taas meesha ka saaray, taasi oo ka carreysiisay Khadiija.
Maanta waxaa khilaafka cadeysay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya kadib markii xafiiska wasiir Khadiijo laga soo saaray warsaxaafadeed lagu dalbanayo in la soo celiyo wadashaqeyntii gobalka iyo wasaaradda.
Waxaa muuqata in khilaafka laba qof u dhaxeeya uu halis geliyay amaanka dad ka badan 10 kun oo qof oo ah shacabka gobalka Banaadir kuwaas oo maalintii iska sii xaadiriyay garoonka si ay ciyaarta udaawadaan. Wali lama sheegin xiliga ay qabsoomi doonto balse waxaa muuqata khilaafka labada dhinac.